Vaovao - Mamorona atin'akanjo izay tsy mila manasa matetika ny fanombohana Danoa
Te-hanao akanjo ba mitovy ihany ve ianao mandritra ny herinandro maro? Mandrosoa eo aloha.
Ny fanombohana danoà iray antsoina hoe Organic Basics dia nilaza fa ny atin'akanjony dia hijanona ho vaovao mandritra ny herinandro maro amin'ny fitafiana, hanafoanana ny filàna fanasana matetika.
Amin'ny alàlan'ny fitsaboana ny atin'akanjony amin'ny Polygiene, Organics Basics dia nilaza fa afaka manakana ny fitomboan'ny bakteria 99,9%, izay lazainy fa manakana ny atin'akanjo haingana tsy hanitra ratsy.
“Ny orinasantsika dia lamaody maharitra. Ny fomba nentim-paharazana amin'ny fividianana, fitafiana, fanasana ary fanariana atin'akanjo lafo dia lafo be dia be amin'ny loharano. Ary tena manimba ny tontolo iainana izany, "hoy i Mads Fibiger, CEO sy mpiara-manorina ny Organic Basics.
Ary marina ny azy. Mila rano sy hery ny fanasana sy fanamainana akanjo, ka arakaraka ny andiovanao matetika ny atin'akanjonao no mampisy ny fiatraikan'ny akanjo amin'ny tontolo iainana.
Na dia mitazona ny haavon'ny freshness aza ny atin'akanjo, na izany aza, mety tsy ho azon'ny olona ny hadisoana ara-tsaina amin'ny fanaovana akanjo itony mandritra ny herinandro maromaro - tamin'ity herinandro ity ihany, nanoratra ny mpanao gazety Elle, Eric Thomas, fa ny famakiana ireo undies vita te-“hamaoka maso” izy.